ဖီဖာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖီဖာ (/ဖီးဖာ/) (အတိုကောက် : FIFA; ပြင်သစ်: Fédération Internationale de Football Association, အင်္ဂလိပ်: International Federation of Association Football) သည် အကျိုးမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်၍ ဘောလုံး၊ ဖူဆယ်ဘောလုံး၊ ကမ်းခြေဘောလုံး အားကစားများ ကို စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟု ထိုအဖွဲ့က ဖော်ပြထားသည်။ ဘောလုံးအားကစား၏ အမြင့်ဆုံး အုပ်ချုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
၂၁ မေ ၁၉၀၄; ၁၁၇ နှစ် အကြာက (၁၉၀၄-၀၅-21)
47°22′53″N 8°34′28″E﻿ / ﻿47.38139°N 8.57444°E﻿ / 47.38139; 8.57444ကိုဩဒိနိတ်: 47°22′53″N 8°34′28″E﻿ / ﻿47.38139°N 8.57444°E﻿ / 47.38139; 8.57444
အကြီးတန်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
Salman bin Ibrahim A (AFC)
ဖီဖာကို ၁၉၄၀ တွင် တည်ထောင်ခဲ့၍ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ နယ်သာလန်၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ စသော အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းများကြားရှိ ပြိုင်ပွဲများကို ကြီးကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရုံးချုပ်ကို ဇူးရစ်ချ်မြို့တွင်ထားရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ(အသင်း)များမှာ ယခုအခါ (၂၁၁) နိုင်ငံအထိရှိလေသည်။ ထိုအမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသကြီးများ၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမည်။ ကမ္ဘာကို ဒေသကြီးခြောက်ခုဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ အာဖရိက၊ အာရှ၊ ဥရောပ၊ မြောက်/အလယ် အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံ၊ သမုဒ္ဒရာပိုင်း၊ တောင်အမေရိကတို့ဖြစ်ကြ၏ ။ ဖီဖာသည် ၎င်း၏အဖွဲ့အသည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၌ ရည်ရွယ်ချက်အများအပြားကို အကြမ်းဖော်ပြထားရာ ဘောလုံးအားကစားကို နိုင်ငံတကာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူတိုင်းကစားနိုင်ခွင့်ရှိစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်ရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး မျှတသည့်ကစားခြင်းဖြစ်စေရန် ထောက်ခံအားပေးရေးတို့ပါဝင်သည်။ ဖီဖာသည် နိုင်ငံတကာ အဓိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းစီမံခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ကာ အထူးအားဖြင့် ၁၉၃၀မှစတင်ကျင်းပခဲ့သော ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ၊ ၁၉၉၁မှစတင်ကျင်းပခဲ့သော ဖီဖာ အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ တို့ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးအားကစား၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို ဖီဖာက တစ်ဖွဲ့တည်း ချမှတ်မှုမရှိသော်လည်း ( နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးအားကစား အဖွဲ့အစည်း ကြီးကြက်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ (International Football Association Board) ကလုပ်ဆောင်၏ ။ ထိုအဖွဲ့ကြီးတွင် ဖီဖာမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်) ဖီဖာက ၎င်း၏ ပြိုင်ပွဲများအားလုံးတွင် ထိုစည်းမျဉ်များကို အသုံးပြု၊ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။  ဖီဖာ၏ ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်သည် ပြိုင်ပွဲအတွက် စရိတ်ကျခံလှူဒါန်း၊ ကမကထပြုခြင်းများမှ ဝင်ငွေရရှိ၍ ၂၀၁၈တွင် ပဖွဲ့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၄,၀၀၀) ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ရာ ၂၀၁၅-၁၈ ရာသီစက်ဝန်းကာလကို အသားတင် အမြတ်ငွေ သန်း (၁,၂၀၀)၊ အရံငွေကြေး သန်း (၂,၇၀၀) ဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။
စုံစမ်းရေး သထင်းထောက်များက ဖီဖာ၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်သည် အကျင့်ပျက်ချစားခြင်း၊ လာဘ်စားခြင်း၊ ဆက် ဘလတ္တာ၏ ဖီဖာဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ခြင်း၊ ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၂၂ တို့တွင် ရုရှားနှင့် ကာတာနိုင်ငံများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ခြင်းများတွင် မဲ မသမာမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်း များနှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ကြသည်။ ဤစွပ်စွဲချက်များက ဖီဖာ၏ အဆင့်မြင့် အရာရှိကိုးဦးနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်သော အလုပ်အမှုဆောင်ငါးဦးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားရေးဌာနက 'တရားမဝင်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှု' (racketeering)၊ (ဆက်သွယ်မှုများမှတစ်ဆင့်) ငွေကြေးမသမာမှု(လိမ်လည်မှု) (wire fraud)၊ ငွေကြေးခဝါချမှု (money laundering) စွဲချက်များဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ မေ ၂၇ တွင် အရာရှိအချို့ကို ဆွစ်အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ ထိုဆွစ်အာဏာပိုင်များကလည်း တစ်ပြိင်နက်၊ သီးသန့် စစ်ဆေးမှုများကို ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင်ချထားပေးခြင်းအား စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသော အဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်က စွဲချက်တင်ထားသော အရာရှိများကိုလည်း အမေရိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဆက် ဘဘတ္တာ၊ မိရှဲ ပလတ်တီးနီအပါအဝင် များစွာသောအရာရှိများကို ဖီဖာ ကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီက ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ အစောပိုင်း၌ ဖီဖာ ဥက္ကဋ္ဌ Gianni Infantinoက ၂၀၁၇ မေတွင်ကျင်းပသော ဖီဖာ ညီလာခံ၌ ကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦး Cornel Borbély နှင့် Hans-Joachim Eckert တို့၏ ပြန်လည်ရွေးကောက်မှုဝင်ခြင်းကို တားဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှု' အကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်မှုများမှာ လူသိထင်ရှား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Infantino ၏ ၂၀၁၇ မေ ၉ အဆိုပြုချက်အပြီး၌ ဖီဖာကောင်စီက ထိုနှစ်ဦးကို အသစ်ပြန်လည် မရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနှစ်ဦးနှင့်အတူ ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် (၁၃)ဦးမှ (၁၁)ဦးကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်။
↑ "Fédération Internationale de Football Association"၊ Filmcircle.com၊ 11 June 2014။ 11 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 October 2014။
↑ FIFA.com။ FIFA Committees - FIFA Council - FIFA.com။ 31 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA.com။ History of FIFA - Foundation - FIFA.com (in en-GB)။ 25 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA.com။ FIFA Statutes (in en)။6April 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA.com။ About FIFA: Organisation (in en)။ 17 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA Financial Report 2018 (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ 31 December 2018။
↑ "FIFA officials arrested on corruption charges; Sepp Blatter isn't among them"၊ 27 May 2015။
↑ Nine FIFA Officials and Five Corporate Executives Indicted for Racketeering Conspiracy and Corruption။ U.S. DOJ Office of Public Affairs (27 May 2015)။ 27 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "World soccer rocked as top officials held in U.S., Swiss graft cases"၊ Reuters၊ 27 May 2015။ 27 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 September 2015။
↑ "Sepp Blatter and Michel Platini banned for eight years by Fifa" (in en)၊ The Daily Telegraph။
↑ "Rise and fall of Michel Platini – the self-proclaimed 'football man' who forgot the meaning of integrity" (in en)၊ The Daily Telegraph။
↑ Conn၊ David။ "Trust in Fifa has improved only slightly under Gianni Infantino, survey finds" (in en-GB)၊ The Guardian၊2March 2017။
↑ Reuters။ "FIFA Ethics Chiefs Facing Uncertain Future"၊ The New York Times၊ 15 March 2017။ [လင့်ခ်သေ]
↑ Infantino at 1. Are the Ethics bigwigs the next stop on his personal 'reform' agenda? (27 February 2017)။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ "FIFA Ethics Committee still investigating 'hundreds' of cases: Borbely"၊ Reuters၊ 10 May 2017။
↑ Conn၊ David။ "Fifa's ousted ethics heads were investigating 'hundreds' of cases" (in en-GB)၊ The Guardian၊ 10 May 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖီဖာ&oldid=701374" မှ ရယူရန်
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။